समाचार ०४८ सालदेखि बुथ कब्जा हुँदै आएको दोलखामा यसपाली के होला ?
Ujyaalo बिहिवार, मंसिर ७, २०७४ २०:१६:००
दोलखा, मंसिर ७ – पहिलो चरणमा चुनाव हुने दोलखामा चुनावको मिति नजिकिएसँगै मतदाता र मतदानस्थल सुरक्षाको चिन्ता बढेको छ । कांग्रेस र वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले एकअर्कालाई बुथ कब्जा गर्न सक्ने आरोप लगाउँदै मतदाता सुरक्षाप्रति चिन्ताजनाएका छन् ।
२०४८ सालदेखि नै दोलखामा बुथ कब्जाको क्रम भंग हुन सकेको छैन । यसैले गर्दा आउँदो चुनावमा पनि बुथ कब्जाको घटना हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । तर दलका उम्मेदवारले भने एकअर्काबाट बुथ कब्जाको जोखिम रहेको भन्दै आरोप प्रत्यारोप गर्ने गरेका छन् । दोलखामा कांग्रेस, एमाले र दोस्रो २०६२/०६३ पछि चुनावमा प्रवेश गरेको माओवादीले समेत बुथ कब्जाको हतियार प्रयोग गर्दै आएकोले चुनौती देखिएको हो ।
मतदाताको मतलाई चुनावको नतिजा मान्ने गरिए पनि यहाँ भने जसको शक्ति उसैको भक्ति भने झैँ शक्ति प्रदर्शन गरेकै भरमा चुनाव जित्छु भन्ने दल तथा उम्मेदवारलाई लाग्ने गरेको देखिन्छ ।
चुनावको मिति नजिकिएसँगै मतदान गर्न जाने कि नजाने, मतदान स्थलमा आफू कत्तिको सुरक्षित हुन्छु भन्ने विषयले मतदातालाई पिरोलेको छ । उम्मेदवारहरुले गर्ने शक्ति प्रदर्शनका क्रममा मतदाता घाइते समेत हुने गरेको पाइन्छ । तर पनि स्वच्छ तवरले चुनाव सम्पन्न गर्न स्थानीय प्रशासन लागि परेको छ । उम्मेदवारहरुले पनि आफूहरुले पनि चुनावी सुरक्षाका लागि सहयोग गर्ने बताएका छन् । बुथ कब्जा भन्ने शब्दलाई यो चुनावमा देखा पर्न समेत नदिने सम्बन्धित निकायले बताउने गरेका छन् ।
कहाँ-कहाँ भएको थियो बुथ कब्जा ?
२०४८ सालदेखि गैरिमुदी, झुले र डाँडाखर्कमा निरन्तर बुथ कब्जा हुँदै आएको छ । गएको स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस, माओवादीको गठबन्धन र एमालेले आ–आफ्नो वर्चस्व रहेका इलाकाका झण्डै एक दर्जन मतदानस्थल कब्जा गरेका थिए ।
कांग्रेसले यसपटक वाम गठबन्धनले गौरीशंकरको खारे, चंखु, मार्बु, सुरी, जुुंगु, सहरे, मालु च्यामाजस्ता मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जाको रणनीति बनाएको आरोप लगाएको छ । यी बुथ मध्ये मार्बु, सहरे, काब्रेलगायत स्थानमा यसअघि पनि बुथ कब्जा भएका थिए ।
वाम गठबन्धनले पनि कांग्रेसबाट झुले, गैरीमुदी, डाँडाखर्क, जफे, भीरकोट, भेडु, नाम्दु, मिर्गेजस्ता ठाउंँमा बुथ कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको दाबी गरेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा गैरीमुदी, झुले, जफे, नाम्दु, क्षेत्रमा कांग्रेसले कब्जा गरेको थियो । आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न स्थानीय तह चुनावमा यस्तै भिडन्त र झडपमा परेर गौरीशंकर र मेलुङमा दुईजनाको ज्यान गएको थियो ।
बुथ कब्जा हुन नदिन के-के छन् योजना ?
मतदान स्थललाई सुरक्षित राख्न र स्वच्छ मतदान हुनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको जनाएको छ । दोलखामा विशेष गरी बुथ कब्जा गर्न राजनीतिक दलहरूले काठमाडौं लगायत ठाउँबाट पेसेवर ‘गुन्डा’ झिकाउने गरेको विगतका चुनावको अनुभवले देखाउँछ । यहि विषयलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखी स्थानीय प्रशासनले केही समयअघिदेखि दोलखाका मुख्य ८ वटा स्थानमा चेकप्वाईन्ट खडा गरेको छ ।
जिल्लाको सिन्धुपाल्चोक र दोलखाको सिमानामा पर्ने २१ किलो, खरिढुङ्गा, मागापौवा, सिंगटी, भोर्ले, लामावगर, जिरी र किर्ने भन्ने स्थानमा चेक प्वाईन्ट खडा गरी कडाइका साथ जाँच गरिरहेको छ । यसैगरी जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुका साथै जिल्लाका ९४ मतदान केन्द्रमध्ये १२ वटालाई अति र बाँंकी सबैलाई संवदेनशील सूचिमा राखिएको छ । त्यसैअनुसार सुरक्षा व्यवस्था समेत कडा बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताउनुभयो । उज्यालोसँग कुराकानी गर्दै थापाले भन्नुभयो, ‘यो चुनावमा बुथ कब्जा गर्छु भनेर कुनै राजनीतिक दलले नसोचे पनि हुन्छ, ढुक्क भएर मतदानगर्न आममतदातालाई अनुरोध गर्छु ।’
२०४८ सालदेखि नै वाम वर्चस्व रहेको दोलखामा यसपटक एमाले र माओवादी गठबन्धनका कारण कांग्रेसले थप असुरक्षा महसुस गरेको छ । कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रुद्रबहादुर खड्काले लोकतन्त्रमा नागरिकको अभिमतलाई कदर गर्नु पर्ने भएकाले बुथ कब्जा हुन नदिन आफूले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले दोलखाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरलेले कुनै राजनीतिक दलले बुथ कब्जा गर्ने प्रयास गरेमा वाम गठबन्धन चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो । उहाँले बुथ कब्जा हुन नदिनका लागि पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई नै परिचालन गरेको बताउनुभयो ।